ikhaya » I-Archives Tag: QYOU Media
Archives Tag: QYOU Media
QYOU Media (TSXV: QYOU OTC: QYOUF), the worldXCHARXs leading curator of premium XCHARXbest-of-the-webXCHARX video for multiscreen distribution, today announced that its programming formats now reach an addressable audience of more than 300 million consumers globally. This marks a threefold increase in distribution reach in six months, fueled by significant new partnerships across Asia, Africa, Europe and North America. New partnerships ...
I-WPT® Distribution e-USA ikhetha iifom ye-QYOU yeeMidiya zeeNtloko kwiMihla ngemihla (i-HUD) yokwakha i-franchise ye-TV yomhlaba wonke.
I-QYOU Media, i-curator ehamba phambili yevidiyo ye-premium ye-intanethi ye-distribution ye-multiscreen, yamkelwa namhlanje idibene ne-WPT® Distribution USA ukukhuthaza nokusabalalisa i-QYOU inkqubo yee-Hads Daily (HUD). I-WPT, negama lesiganeko kumdlalo we-TV kunye nokuzonwabisa, ngamazwe ngamazwe, iya kuhambisa i-HUD njengenxalenye yehlabathi layo elichanekileyo kwi-TV ye-esports. Intsebenziswano yeWPT kunye ...
I-GoMedia izisa ebhodini i-QYOU ukubonelela umxholo we-UK kunye nabagibeli abaqeqeshi base-UK
I-QYOU Media (TSXV: I-OYT OTC: IQYOUF), i-curator ehamba phambili yevidiyo ye-premium ye-intanethi yokusabalalisa i-multisreen, iye yabhengeza i-UK yokuqala yokusebenzisana ne-GoMedia, i-Europe ehamba phambili kwi-boardinfotainment umboneleli, oya kubona i-QYOU ilandelwe umxholo wevidiyo uhanjiswe kubakwa-UK. Abathengi babukela ividiyo ngaphezulu kunanini ngaphambili ngaphambi kwexesha xa behamba kwaye behamba, ngokukodwa izixhobo ze-onmobile. NgokukaMarketer, ngaphezulu ...
I-QYOU kunye ne-iflix iqabane kwiqhinga eliyinxalenye yehlabathi jikelele
I-QYOU Media, i-curator ehamba phambili yevidiyo ye-premium ye-intanethi ye-distribution ye-multiscreen, eyabhengezwa namhlanje inxaxheba kunye ne-iflix, inkonzo ehamba phambili yokuthengisa i-OTT kwiimarike ezikhulayo, ukusabalalisa i-QYOU kwividiyo ye-intanethi kwiindawo zehlabathi ze-25. Isivumelwano sifaka amafomathi ahambelana neendawo zendawo kwi-iflix yenkonzo e-Indonesia, eMalaysia nasePhilippines. Oku kubonisa inyathelo lokuqala ...
I-QYOU ijoyina i-YoufoneTV line-up ku-Netherlands
I-QYOU Media, i-curator ehamba phambili yevidiyo ye-premium ye-web-quality ye-intanethi yokusabalalisa i-multiscreen, namhlanje izisa ishaneli yayo yomgca iya kufumaneka njengenxalenye ye-Youfone's line-up-up kwisevisi yayo ye-OTT esanda kutsalwa, i-YoufoneTV. Umxholo we-QYOU uza kuhanjiswa kwi-Yfone's 170,000 abhalisile befowuni njengoko ubheka ukubandakanya abaphulaphuli abaneminyaka eyi-
I-QYOU ibetha kwakhona ePortugal neNOWO
I-QYOU Media, i-curator ehamba phambili yevidiyo ye-premium 'best-of-web' ye-intanethi yokusabalalisa i-multiscreen iye yavakalisa isivumelwano esitsha kunye nomqhubi we-telecom NOWO. Ubambiswano buya kubona i-QYOU umzila ohambelana nomxholo wevidiyo wekhompyutheni wekhompyutheni ekhompyutheni ofumanekayo kubathengi be-NOWO ngokusebenzisa inkonzo yeTV yasePortugal, ukuzisa umxholo we-QYOU kwimizi eyongezelelweyo ye-900,000 kweli lizwe. Ukubukela kwevidiyo kwi-Portugal ePortugal ...
I-QYOU yenza amaza e-Caribbean nge-Flow deal
I-QYOU Media (TSXV: QYOU), i-curator ehamba phambili yevidiyo ye-premium ye-web-quality ye-intanethi yokusabalalisa i-multiscreen, iye yahambelana nomqhubi we-telecommunications ohamba ngeCaribbean. Le ngxelo yokuqala ye-QYOU kwiiCaribbean. Inethiwekhi ye-Flow yezemidlalo, iMidlalo yeMidlalo ye-Flow-eyinto yecala lokuya kwinqanaba lezemidlalo-QYOU iya ...
Naphi na iTV ikhetha i-QYOU inkonzo entsha ye-OTT kwi-Latin America
I-QYOU Media (TSVX: QYOU), i-curator ehamba phambili yevidiyo ye-premium ye-best-of-web-ye-intanethi yokusabalalisa i-multisreen ihlangene nomniki-nkonzo wenkxaso-mboleko, apho i-iTV Broadcasting Corporation. Umzila weQYOU weqhosha lomxholo wevidiyo ochanekileyo uza kufakwa kwi-line-up ye-WhereverTV Latino, ukuqaliswa kwenkonzo entsha eMexico kule hlotyana ekhuthaza ukunyuka kokutya kwe-TV ye-digital eMexico. Uphando lweComScore ...
Hey Buddy!, I found this information for you: "QYOU launches Heads Up Daily (HUD) esports format on Instagram TV". Here is the website link: http://www.broadcastbeat.com/qyou-launches-heads-up-daily-hud-esports-format-on-instagram-tv/. Thank you.